Barcelona oo 3-1 ku garaacday kooxda PSG, ciyaar ka tirsaneyd Champion League | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Barcelona oo 3-1 ku garaacday kooxda PSG, ciyaar ka tirsaneyd Champion League
Barcelona oo 3-1 ku garaacday kooxda PSG, ciyaar ka tirsaneyd Champion League
Barcelona ayaa guul dahabi ah kooxda PSG garoonkeeda Parc des Princes kaga soo gaadhay guul dahabi ah kadib markii ay kooxd Luis Enrique guul 3:1 ah ka soo gaadhay PSG. Barcelona ayaa guushan ay ka soo gaadhay ay goolasha udhaliyeen Neymar iyo Lius Suarez oo laba gool oo qurux badan kooxdiisa udhaliyay. Barcelona ayaa ku sii dhawaatay inay boos ka samaysato wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga iyada oo waliba kulanka luga danbe lagu ciyaari doono garoonkeeda Camp Nou.Iniesta ayaa kulankan dhaawac looga dhex qaaday kadib markii uu dhaawac dharka ka soo gaadhay.
Kooxda PSG ayaa markii labaad xili ciyaareedkan garoonkeeda ku soo dhawaynaysay kooxda Barcelona oo ay isku group ahaayeen. PSG ayaa ku hamiyaysay inay markale kulanka lugta hore ee ka dhacaya garoonkeeda guul kaga gaadho Barcelona, waxayna maanka ku haysay dhibaatada kulanka Camp Nou.
Dhinaca kale Barcelona ayaa doonaysa inay guuldaradii PSG kaga soo gaadhay kulankii Paris ay ka dhigato cashar ay wax ka baratay isla markaana waxay ku hamiyaysaa inay kulanka lugta hore natiijo fiican ka soo gaadho PSG si kulanka Camp Nou uu ugu sahlanaado.PSG ayaan 33 kulan oo ay garoonkeeda Parc des Princes ku ciyaartay tartamada Yurub aan wax guuldaro ah la kulmin waxayna doonaysay inay rekoodheeda sii ilaashato.
Kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan oo si wayn loo sugayay isla markaana ay labada kooxood diyaar garaw fiican sameeyeen. PSG ayay ka maqnaayeen ciyaartoy muhiim ahaa oo ay ugu horeeyaan Ibrahimovic iyo Veratti.Barcelona ayaa ciyaarta ku bilaabatay inay kubbada ilaashato halka kooxda martida ahayd ee PSG ay difaac iyo weerar deg deg ah ciyaarta ku bilaabatay.
Kadib markii ay ciyaartu ku jirtay xaalad aan weerar halis ah laysku qaadin ayuu daqiiqadii 15 aad Messi ku sigtay inuu kooxdiisa hogaanka u dhiibo kadib markii uu kubbad layaableh ku darbeeyay goolka PSG laakiin dadaalkiisa ayaa ku dhamaaday inay kubbad ku dhacdo birta goolka.
Barcelona ayaa si tartiib ah u bilawday inay tijaabiso difaaca PSG waxayna abuurtay fursado dhawr ah laakiin Barcelona ayaa daqiiqdii 18 heshay fursada ay ciyaarta hogaanka ugu qabtay kadib markii uu Neymar kooxdiisa udhaliyay goolka furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Barcelona ciyaarta hogaanka ugu qabatay.
Lionel Messi ayaa khadka dhexe kubbad kaga soo qaatay Busquets, wuxuuna la soo dhex orday kooxda PSG kadib ayuuna Messi kubbada meel banaan ah udhigay Neymar kaas oo ii dhexgalayay xerada ganaaxa PSG, Neymar ayaan wax qalad ah samayn wuxuuna inta uu daganaan sameeyay isla markaana uu si fiican uga farsamaystay goolhaya PSG ayuu kooxdiisa goolka furitaanka.
Caawinta Messi ee goolka Neymar ayaa ahayd gool caawintiisii 23 aad ee xili ciyaareedkan tartamada oo dhan.Neymar ayaa saddexdii kulan ee ay PSG iyo Barcelona xili ciyaareedkan iskaga horyimaadeen Champions Leaque kulankasta shabaqa soo taabtay.
Daqiiqadii 21 aad ayay PSG dhibaato horlihi soo gaadhay kadib markii dhaawac ciyaarta looga saaray Thiago Silva waxaana lagu soo badalay David Luiz oo markii hore la filayay inuu kulankan seegi doono. Luiz ayaa markii hore la qorsheegay inuu dhaawac muruqa ah kaga soo kabsan doono muddo bil ah laakiin sagaal maalmood oo kaliya ayuu ku soo laabtay.
Daqiiqdii 28 aad ayay PSG heshay fursad cadaan ahayd oo gool loo fishay kadib markii ay kubbad layaableh isla soo ciyaareen Matuidi iyo Lavezzi. Lavezzi ayaa goolka Barcelona oo banaan ah oo goolhayaha oo kaliyi ku xidhan yahay kubbada u tuuray Cavani laakiin javier Mascherano ayaa sameyay badbaadin fantastik ah oo kooxdiisa ka babaadisay in goolka barbarha laga dhaliyo. Mascherano ayaa u muuqday inuu ku dhaawacmay takalka uu Cavani fursada kaga badbaadiyay laakiin wuxuu awooday inuu ciyaarta sii wato.
Daqiiqadii 43 aad ayuu Luis Suarez ku sigtay inuu kooxdiisa Barcelona udhaliyo goolka labaad kadib markii uu kubbad ka soo xoogay Luiz isla markaana uu la soo dhex galay xerada ganaax PSG uu goolka PSG ku ku darbeeyay kubbad layaableh oo wareegaysay laakiin goolhaye Sirigu ayaa badaabiyay inkasta oo uu ku sigtay inuu ku dhaacmayo.Sirigu ayaa si xun dhulka ugu dhacay markii uu badbaadiyay kubbada uu Suarez soo darbeeyay wuxuuna u muuqday inuu garabka wax ka noqday.Sirigu ayaa ciyaarta caadi u sii watay.
Inkasta oo ay PSG dhamaadkii ciyaarta bilawday inay halis ku abuurto difaaca Barcelona ayay hadda ku guul daraysatay inay la timaado goolka barbaraha, waxana qaybta hore lagu kala nastay 1:0 ay Barcelona hogaanka ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay PSG soo laabatay iyada dardar fiican ku socota waxayna bilawday inay ka dagaalanto goolka ay Barcelona kaga hormartay iyada oo garoonkeeda joogta. waxayna bilawday inu fursado fiican abuurto.daqiiqadii 50 aad ayuu Pastore kubbad gantaal ah ku soo tuuray goolka Barcelona laakiin Ter Stegen ayaa sameeyay badbaadin aad u fiican.
Daqiiqadii 53 aad ayay dhibaato horlihi soo gaadhay barcelona kadib markii sariita dhaawaca lagu qaado la saaray Andrés Iniesta waxaana lagu soo badalay Xavi Hernandez. Iniesta ayaa u muuqday inuu dhaawac ka soo gaadhay dhabarka laakiin ilaa hadda lama oga inta uu leeg yahay dhaawac Iniesta ciyaarta looga dhex qaaday.
Barcelona ayaa markale bilawday inay tijaabiso difaaca PSG waxayna daqiiqadii 67 aad heshay fursada ay kula timid goolkeeda labaad, waxaana markan si cajiib ah goolka labaad udhaliyay Luis Suárez kaas oo si fiican uga shaqeeyay difaaca PSG, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Barcelona hogaanka ku dheeraysatay.
Luis Suárez ayaa kubbad uu ka helay Montoya ayuu marka hore si fiican ugu soo garaacay David Luiz isaga oo kubbada ka soo saaray labadiisa lugood dhexdiisa, wuxuuna markale kubbada ka sii dhexsaaray Marquinhos wuxuna ugu danbayn si fiican iskaga cidhiidhay Maxwel kadib yuuna kubbada ku hubsaday shabaqa PSG.
Barcelona ayaa sii wadatay qaab ciyaareedkeeda ficiican waxaana markale indhaha xaday Luis Suarez kaas oo markale bahdilay David Luiz isla markaana kooxdiisa udhaliyay goolka qurux badan wuxuuna markan ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Barcelona hogaanka ugu raaxaysanayso.
Luis Suarez ayaa kubbad ka helay Javier Mascherano wuxuuna kula soo orday David Luiz kaas oo markale ku guuldaraysta inuu iska difaaco Suarez isla markaana markale ku guuldaraystay inuu lugisiisa isku qabto, Suarez ayaa markale wado ka dhigtay lugaha Luiz wuxuuna kubbada kula soo baxay goolhaye Sirigu, Suarez ayaa kubbad wareegaysa dulmarayay Sirigu wuxuuna sidaa kudhaliyay goolkiisa labaad ee ciyaarta. goolkan ayaa ahaa goolkii 11 aad ee uu Suarez u dhaliyay Barcelona 11 kii kulan ee ugu danbeeyay.
PSG ayaa daqiiqadii 82 aad heshay goolkeeda kowaad waxaana udhaliyay Gregory van der Wiel kaas oo kuubad xoogan ku tuuray goolka Barcelona laakiin kuubada ayaa ku sii dhacday Jeremy Mathie waxayna sidaa ku gaashay goolka Barcelona. ciyaarta ayaa markan noqotay 3:1 ay wali Barcelona hogaanka ku hayso.
Inkasta oo ay PSG dhamaadkii ciyaarta samaysay fursado fiican ayay hadda ku guuldaraysatay inay wax gool kale ah la timaado. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3:1 ay Barcelona ku dubatay PSG oo garoonkeeda joogtay.Barcelona ayaa kulanka lugta danbe PSG ku soo dhawayn doonta Camp Nou waxayna hadda ku sii fikiraysaa sidii ay u sii xejisan lahayd guusha ay soo gaadhay. waa markii ugu horaysay ee ay PSG guuldaro garoonkeeda kula kulanto tartamada Yurub.